Kudzivirira kwaMwari—Mwari Anotidzivirira Sei? | Swedera Pedyo
Simba Rokudzivirira—“Mwari Utiziro Hwedu”
1, 2. VaIsraeri vakanga vari mungozi yei sezvavaipinda munharaunda yeSinai muna 1513 B.C.E., uye Jehovha akavakurudzira sei?
VAISRAERI vakanga vari mungozi sezvavaipinda munharaunda yeSinai pakuvamba kwa1513 B.C.E. Vakanga vakatarisana norwendo runotyisa, rwendo rwokufamba nomu“renje guru rinotyisa raiva rizere nenyoka dzine uturu nezvinyavada.” (Dheuteronomio 8:15, The New English Bible) Vakanga vari mungozi yokurwiswa nemarudzi aivavenga. Jehovha ndiye akanga asvitsa vanhu vake munzvimbo yakadai. SaMwari wavo, aizokwanisa kuvadzivirira here?
2 Mashoko aJehovha aikurudzira zvikuru: “Makaona zvandakaitira va[Ijipiti], uye kuti ndakakutakurai imi pamapapiro egondo, ndikakusvitsai kwandiri.” (Eksodho 19:4) Jehovha akayeuchidza vanhu vake kuti akanga avanunura pavaIjipiti, achiita seaishandisa makondo, kuti avatakure kuenda kwakachengeteka. Asi pane zvimwe zvikonzero nei “mapapiro egondo” achifananidzira kudzivirira kwaMwari nenzira yakakodzera.
3. Nei zvakakodzera kufananidza kudzivirira kwaJehovha ne“mapapiro egondo”?
3 Gondo rinoshandisa mapapiro aro akafara, akasimba kwete kungoyengerera chete. Zuva richipisa zvikuru, mai vegondo vanoisa mumvuri nemapapiro avo—ayo anogona kureba kupfuura mamita maviri—kuti uve musambureni wokudzivirira, vachidzivirira vana vavo vasati vasimba pazuva rinopisa zvikuru. Pane dzimwe nguva, vanovhumbamira vana vavo nemapapiro kuti vavadzivirire pamhepo inotonhora. Sezvinongoita gondo richidzivirira vana varo, ndizvo zvakanga zvaitawo Jehovha achidzivirira nokuchengetedza rudzi rutsva rwaIsraeri. Zvino murenje, vanhu vake vaizoramba vachiwana utiziro mumumvuri wemapapiro ake akasimba chero bedzi vairamba vakatendeka. (Dheuteronomio 32:9-11; Pisarema 36:7) Asi isu nhasi tinogona kunyatsotarisira kudzivirirwa naMwari here?
Chipikirwa Chokudzivirirwa naMwari
4, 5. Nei tichigona kuva nechivimbo chakakwana muchipikirwa chaMwari chokudzivirira?
4 Jehovha zvechokwadi anokwanisa kudzivirira vashumiri vake. Ndi“Mwari Wamasimba Ose”—zita rokuremekedza rinoratidza kuti ane simba risingadzivisiki. (Genesi 17:1) Kufanana nefungu risingagoni kumiswa, simba raJehovha kana orishandisa harigoni kumiswa. Sezvo achigona kuita chero chaanenge achida, mubvunzo unomuka ndewokuti, ‘Kuda kwaJehovha here kushandisa simba rake kudzivirira vanhu vake?’
5 Mhinduro yacho mushoko rimwe, ndeyokuti hungu! Jehovha anotipikira kuti achachengeta vanhu vake. “Mwari ndiye utiziro hwedu nesimba redu, ndiye mubatsiri uri pedyo-pedyo panguva dzokumanikidzwa,” rinodaro Pisarema 46:1. Sezvo Mwari “asingamborevi nhema,” tinogona kuva nechivimbo chakakwana muchipikirwa chake chokutidzivirira. (Tito 1:2) Regai timboona mamwe emashoko okufananidzira ayo Jehovha anoshandisa kurondedzera kudzivirira kwake.
6, 7. (a) Mufudzi womunguva inotaurwa muBhaibheri aidzivirira makwai ake pachii? (b) Bhaibheri rinoenzanisira sei kuda nomwoyo wose kwaJehovha kudzivirira nokutarisira makwai ake?
6 Jehovha Mufudzi, uye “tiri vanhu vake, namakwai anofudzwa naye.” (Pisarema 23:1; 100:3) Imhuka shomanana dzisingagoni kuzvidzivirira sezvakaita makwai anopfuyiwa. Mufudzi womunguva dzinotaurwa muBhaibheri aifanira kuva akashinga kuti adzivirire makwai ake pashumba, mhumi, mabheya, uye pambavha. (1 Samueri 17:34, 35; Johani 10:12, 13) Asi pane nguva apo kudzivirira makwai kwaida unyoro. Kana gwai raiberekera kure nedanga, mufudzi ane hanya airinda mai vacho panguva iyi yavaisagona kuzvibatsira obva atora gwayana racho rainge risingagoni kuzvidzivirira kuenda kudanga.
Ano“atakura pachipfuva chake”
7 Nokuzvienzanisa nomufudzi, Jehovha anotivimbisa nezvechido chake chomwoyo wose chokutidzivirira. (Ezekieri 34:11-16) Yeuka kurondedzerwa kwaJehovha kuri pana Isaya 40:11, kunokurukurwa muChitsauko 2 chebhuku rino: “Uchafudza boka rake somufudzi, uchaunganidza makwayana ake mumaoko ake, nokuatakura pachipfuva chake.” Gwayana rinosvika sei pakuva “pachipfuva” chomufudzi—mipendero yenguo yake yokumusoro? Gwayana ringaenda kumufudzi, kunyange kugunzva gumbo rake. Zvisinei, mufudzi ndiye anofanira kukotama, osimudza gwayana, onyatsoribata zvakanaka pachipfuva chake. Mufananidzo wakanaka zvikuru wounyoro wokuda kwoMufudzi wedu Mukuru kutidzivirira nokutichengeta!
8. (a) Chipikirwa chaMwari chokudzivirira chinoshanda kuna ani, uye izvi zvinoratidzwa sei pana Zvirevo 18:10? (b) Chii chinobatanidzwa pakuwana utiziro muzita raMwari?
8 Chipikirwa chaMwari chokudzivirira hachisi chavose vose—chinongowanikwa bedzi nevanoswedera pedyo naye. Zvirevo 18:10 inoti: “Zita raJehovha inhare yakasimba; wakarurama unovangiramo ndokuchengetwa.” Munguva inotaurwa muBhaibheri, nhare dzimwe nguva dzaivakwa murenje senzvimbo dzakachengeteka dzokuvanda. Asi zvaiva kune aiva mungozi wacho kuti atizire kunhare yakadaro kuti anovanda. Zvakafanana nokuwana utiziro muzita raMwari. Izvi hazvirevi kungodzokorora zita raMwari; zita raMwari pacharo hausi mushonga wemashiripiti. Asi, tinofanira kuziva nokuvimba noMuridzi wezita iroro torarama mukuwirirana nemitemo yake yakarurama. Mutsa mukuru waJehovha kutikurudzira kuti kana tikaenda kwaari nokutenda, achava nhare yokutidzivirira!
“Mwari Wedu . . . Anogona Kutirwira”
9. Jehovha haana kungogumira pakuvimbisa kudzivirira sei?
9 Jehovha haana kungoguma nokuvimbisa kudzivirira. Munguva inotaurwa muBhaibheri, akaratidza nenzira inoshamisa kuti anokwanisa kudzivirira vanhu vake. Munhoroondo yevaIsraeri, “ruoko” rune simba rwaJehovha kazhinji rwakaita kuti vavengi vane simba vatambire kure. (Eksodho 7:4) Zvisinei, Jehovha akashandisawo simba rake kudzivirira vanhu.
10, 11. Mienzanisoi yomuBhaibheri inoratidza mashandisiro akaita Jehovha simba rake rokudzivirira nokuda kwevanhu?
10 Apo vaHebheru vaduku vatatu—Shadhiraki, Meshaki, naAbhedhinego—vakaramba kupfugamira chifananidzo chendarama chaMambo Nebhukadhinezari, mambo akanga ashatirwa akati aizovakanda muchoto chaipisa kwazvo. “Mwari uchakurwirai mumaoko angu ndoupiko?” akashora achidaro Nebhukadhinezari, mambo aiva nesimba kupfuura vose panyika. (Dhanieri 3:15) Varume vaduku vatatu ava vaiva nechivimbo chakakwana musimba raMwari wavo rokuvadzivirira, asi havana kungoti achaita kudaro. Naizvozvo, vakapindura vachiti: “Kana zvikaitika hazvo, Mwari wedu watinoshumira ungagona kutirwira.” (Dhanieri 3:17) Zvechokwadi, choto chinopisa ichocho, kunyange zvazvo chakaitwa kuti chipise zvakapetwa kanomwe kupfuura nguva dzose, hachina kuva chinhu chakaoma kuna Mwari wavo ane simba rose. Akavadzivirira, uye mambo akamanikidzwa kubvuma kuti: “Hakuna mumwe mwari unogona kurwira saizvozvo.”—Dhanieri 3:29.
11 Jehovha akaratidzawo simba rake rokudzivirira zvinoshamisa zvechokwadi paakatamisira upenyu hwoMwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga mudumbu remhandara yechiJudha Mariya. Ngirozi yakaudza Mariya kuti aizo‘namba mudumbu make obereka mwanakomana.” Ngirozi yacho yakatsanangura kuti: “Mudzimu mutsvene uchaburukira pauri, uye simba roWokumusorosoro richakufukidza.” (Ruka 1:31, 35) Zvinoratidza sokuti Mwanakomana waMwari akanga asati ambopinda pane ngozi zvakadai. Chivi nokusakwana kwaamai vaiva munhu wenyama zvaizokanganisa mwana ari mudumbu here? Satani aizokwanisa kukuvadza kana kuti kuuraya Mwanakomana iyeye asati aberekwa here? Zvaisabvira! Naizvozvo Jehovha akaumba rusvingo rwokudzivirira Mariya kuti pasava nechinhu—pasava nokusakwana, pasava nesimba rinokuvadza, pasava nemhondi, kana dhimoni ripi neripi—raigona kukuvadza mwana ari kukura mudumbu, kubva panguva yokunambwa zvichienda mberi. Jehovha akapfuurira kudzivirira Jesu munguva youpwere hwake. (Mateu 2:1-15) Kusvikira panguva yaMwari yakagadzwa, Mwanakomana wake anodiwa akanga asingaurayiki.
12. Nei Jehovha akadzivirira vamwe vanhu nenzira inoshamisa munguva inotaurwa muBhaibheri?
12 Nei Jehovha akadzivirira vamwe vanhu nenzira dzinoshamisa kudaro? Kazhinji Jehovha akadzivirira vamwe vanhu kuitira kuti adzivirire chimwe chinhu chinokosha zvikuru: kuzadzika kwechinangwa chake. Somuenzaniso, kupona kwaJesu achiri kasvava kwakanga kuchikosha nokuda kwokuzadzika kwechinangwa chaMwari, icho pakupedzisira chichabatsira vanhu vose. Kuratidzwa kwakawanda kwesimba rokudzivirira kwakanyorwa kunoumba Magwaro akafuridzirwa, ayo “akanyorwa kuti tidzidze, kuti nokutsungirira kwedu uye nokunyaradza kunobva muMagwaro tive netariro.” (VaRoma 15:4) Hungu mienzaniso iyi inosimbisa kutenda kwedu muna Mwari ane simba rose. Asi kudzivirirwa kworudzii kwatingatarisira kuna Mwari nhasi?
Izvo Kudzivirirwa naMwari Kusingarevi
13. Jehovha anosungirwa kutiitira zvishamiso here? Tsanangura.
13 Chipikirwa chokudzivirirwa naMwari hachirevi kuti Jehovha anosungirwa kutiitira zvishamiso. Aiwa, Mwari wedu haatipikiri upenyu husina zvinonetsa munyika ino. Vashumiri vakatendeka vazhinji vaJehovha vanosangana nematambudziko akakomba, akadai sourombo, hondo, urwere, uye rufu. Jesu akanyatsoudza vadzidzi vake pachena kuti sevanhu vaigona kutourayirwa kutenda kwavo. Ndicho chikonzero nei Jesu akasimbisa kudikanwa kwokutsungirira kusvika kumugumo. (Mateu 24:9, 13) Kudai Jehovha aizoshandisa simba rake pose pose kuti anunure nenzira inoshamisa, paizova nechikonzero chokuti Satani ashore Jehovha uye kusava nechokwadi kana kuzvipira kwedu kuna Mwari wedu kuri kwomwoyo wose.—Jobho 1:9, 10.
14. Mienzanisoi inoratidza kuti Jehovha haadziviriri vashumiri vake vose nguva dzose munzira dzakafanana?
14 Kunyange munguva dzinotaurwa muBhaibheri, Jehovha haana kushandisa simba rake rokudzivirira kuvharidzira mumwe nomumwe wevashumiri vake parufu rwaikurumidza kuuya. Somuenzaniso, muapostora Jakobho akaurayiwa naHerodhi muna 44 C.E.; asi nguva pfupi kubva ipapo, Petro akanunurwa “paruoko rwaHerodhi.” (Mabasa 12:1-11) Uye Johani mukoma waJakobho, akasara ari mupenyu Petro naJakobho vafa. Sezviri pachena, hatigoni kutarisira Mwari wedu kudzivirira vashumiri vake vose munzira dzakafanana. Kunze kwezvo, “nguva nezvinoitika” zvinotiwira tose. (Muparidzi 9:11) Saka Jehovha anotidzivirira sei nhasi?
Jehovha Anopa Kudzivirira Chaiko
15, 16. (a) Uchapupu hwei huripo hwokuti Jehovha akadzivirira vanamati vake seboka? (b) Nei tichigona kuvimba kuti Jehovha achadzivirira vashumiri vake zvino uye mukati mo“kutambudzika kukuru”?
15 Kutanga, funga nezvokudzivirirwa chaiko. Sevanamati vaJehovha, tinogona kutarisira kudzivirirwa seboka. Dai kusiri kudaro, taizova nyama yemagora kuna Satani. Funga izvi: Satani, “mutongi wenyika ino,” hapana chaaizoda kupfuura kuparadza kunamata kwechokwadi. (Johani 12:31; Zvakazarurwa 12:17) Dzimwe dzehurumende dzine simba zvikuru panyika pano dzakarambidza basa redu rokuparidza uye dzakaedza kutiparadza zvachose. Asi, vanhu vaJehovha vakaramba vakasimba uye vakaramba vachiparidza vasingaregi! Nei nyika dzine simba dzakakundikana kumisa basa reboka duku iri revaKristu rinoratidza serisingagoni kuzvidzivirira? Nokuti Jehovha akatidzivirira nemapapiro ake akasimba!—Pisarema 17:7, 8.
16 Zvakadini nokudzivirirwa chaiko mukati mo“kutambudzika kukuru” kuri kuuya? Hatifaniri kutya kutonga kwaMwari. Pamusoro pazvo, “Jehovha anoziva nzira yokununura nayo vanhu vakazvipira kuna Mwari mumuedzo, asi kuchengetera vanhu vasina kururama zuva rokutongwa kuti vagurwe.” (Zvakazarurwa 7:14; 2 Petro 2:9) Panguva ino, nguva dzose tinogona kuva nechokwadi nezvezvinhu zviviri. Chokutanga, Jehovha haazombobvumiri vashumiri vake vakatendeka kuparadzwa zvachose pasi pano. Chechipiri, achapa mubayiro woupenyu husingaperi munyika itsva yakarurama kune vanoramba vakaperera—kana zvikadikanwa, achiita zvokuvamutsa. Kune avo vanofa, hapana nzvimbo yakachengeteka zviri nani yokuva kupfuura mundangariro yaMwari.—Johani 5:28, 29.
17. Jehovha anotidzivirira sei achishandisa Shoko rake?
17 Kunyange zvino, Jehovha anotidzivirira achishandisa “shoko” rake benyu, iro rine simba rokuporesa mwoyo nokuchinja upenyu. (VaHebheru 4:12) Nokushandisa nheyo dzaro, tinogona pane dzimwe nguva kudzivirirwa pakukuvadzwa chaiko. “Ini Jehovha . . . ndinokudzidzisa zvinokubatsira,” inodaro Isaya 48:17. Pasina mubvunzo kurarama maererano neShoko raMwari kunogona kuvandudza utano hwedu nokurebesa upenyu hwedu. Somuenzaniso, nemhaka yokuti tinoshandisa zano reBhaibheri rokurega ufeve nokuzvichenesa patsvina, hatiiti tsika dzisina kuchena nedzinokuvadza dziri kuparadza upenyu hwevanhu vazhinji vasingadi Mwari. (Mabasa 15:29; 2 VaKorinde 7:1) Tinoonga kwazvo kudzivirira kunoita Shoko raMwari!
Jehovha Anotidzivirira Pakunamata
18. Jehovha anotidzivirira nechii pakunamata?
18 Chinotokosha zvikuru ndechokuti Jehovha anotidzivirira pakunamata. Mwari wedu ane rudo anotidzivirira kuti tisakanganiswa pakunamata nokutishongedzera nezvatinoda kuti titsungirire miedzo uye kuchengetedza ukama hwedu naye. Naizvozvo Jehovha anochengetedza upenyu hwedu, kwete kwemakore mapfupi mashomanana asi nokusingaperi. Funga nezvezvimwe zvatinopiwa naMwari zvingatidzivirira pakunamata.
19. Mudzimu waJehovha ungatiita kuti tikunde chero muedzo watingatarisana nawo sei?
19 Jehovha munhu “Wokunzwa munyengetero.” (Pisarema 65:2) Apo zvinotidzvinyirira muupenyu zvinoratidza sezvotikurira, kudururira mwoyo wedu kwaari kunogona kutizorodza zvikuru. (VaFiripi 4:6, 7) Angasaita chishamiso chokubvisa miedzo yedu, asi achipindura minyengetero yedu yomwoyo wose, angatipa uchenjeri hwokubata nayo. (Jakobho 1:5, 6) Kupfuura ipapo, Jehovha anopa mudzimu mutsvene kune vanomukumbira. (Ruka 11:13) Mudzimu une simba iwoyo unogona kutiita kuti tikunde chero muedzo upi kana kuti chinetso chatingatarisana nacho. Unogona kutipa “simba rinopfuura romuzvarirwo” kuti titsungirire kusvikira Jehovha abvisa zvinetso zvose zvinorwadza munyika itsva yave pedyo zvikuru.—2 VaKorinde 4:7.
20. Simba raJehovha rokudzivirira ringaratidzwa sei nokuhama dzedu?
20 Pane dzimwe nguva, simba raJehovha rokudzivirira ringaratidzwa nokuhama dzedu. Jehovha akaunza vanhu vake mu“sangano rose rehama” romunyika yose. (1 Petro 2:17; Johani 6:44) Muushamwari hwoukama ihwohwo, tinoona uchapupu chaihwo hwesimba romudzimu mutsvene waMwari rokuchinja vanhu kuti vaite zvakanaka. Mudzimu iwoyo unoita zvibereko matiri—unhu hwakanaka hunokosha, kubatanidza rudo, mutsa, uye kunaka. (VaGaratiya 5:22, 23) Nokudaro, patinenge tichishushikana uye imwe hama yedu yongonzwa kuda kutipa zano rinobatsira, kana kuti kutipa mashoko okukurudzira atinenge tichida kwazvo, tinogona kuonga Jehovha nokutichengeta kwake nenzira iyi.
21. (a) Jehovha anogovera zvokudya zvomudzimu zvipi panguva yakafanira achishandisa “muranda akatendeka, akangwara”? (b) Iwe pachako wakabatsirwa sei nezvatinopiwa naJehovha kuti zvitidzivirire mukunamata?
21 Jehovha ane zvimwezve zvaanotipa zvinodzivirira: zvokudya zvomudzimu zvinouya panguva chaiyo. Kutibatsira kuti tiwane simba muShoko rake, Jehovha akapa “muranda akatendeka, akangwara” basa rokugovera zvokudya zvokumudzimu. Muranda akatendeka iyeye anoshandisa mabhuku, kusanganisira magazini eNharireyomurindi neMukai!, pamwe chete nemisangano, magungano, uye kokorodzano kutipa “zvokudya . . . panguva yakafanira”—zvatinoda, panguva yatinozvida. (Mateu 24:45) Wati wambonzwa chimwe chinhu pamusangano wechiKristu—mukutsinhira, muhurukuro, kana kuti kunyange munyengetero—chakakupa simba chairo rawaida nekurudziro here? Wakambobatsirwa muupenyu hwako neimwe nyaya yakabudiswa mune imwe yemagazini edu here? Yeuka, Jehovha anogovera zvinhu zvose izvi kuti atidzivirire mukunamata kwedu.
22. Jehovha anoshandisa simba rake nguva dzose munzirai, uye nei kuita kwake kudaro kwakatinakira?
22 Jehovha zvechokwadi inhoo “kune vose vanovanda maari.” (Pisarema 18:30) Tinonzwisisa kuti haashandisi simba rake kutidzivirira panhamo dzose iye zvino. Zvisinei, anoshandisa simba rake rokudzivirira nguva dzose kuti chinangwa chake chiitike. Pakupedzisira, kuita kwake kudaro kunoguma nezvakanakisisa nokuda kwevanhu vake. Kana tikaswedera pedyo naye toramba tiri murudo rwake, Jehovha achatipa upenyu hwakakwana husingaperi. Tichifunga izvi, zvechokwadi tingaona kutambura kwose munyika ino so“kwenguva duku uye kwakareruka.”—2 VaKorinde 4:17.
Pisarema 23:1-6 Jehovha, Mufudzi Mukuru, anodzivirira nokutarisira vanhu vake vakaita semakwai sei?
Pisarema 91:1-16 Jehovha anotidzivirira sei panhamo dzinouya mukunamata, uye tinofanira kuitei kuti atidzivirire?
Dhanieri 6:16-22, 25-27 Jehovha akadzidzisa sei mumwe mambo wekare nezvesimba Rake rokudzivirira, uye tingadzidzei mumuenzaniso uyu?
Mateu 10:16-22, 28-31 Tingafanira kutarisira kushorwa naani, asi nei tisingafaniri kutya vashori?
Ramba Uri Mumupata waJehovha Unodzivirira
Mupata wokudzivirira chii uye vanamati vaJehovha vangadzivirirwa sei imomo?